Ndị na -emepụta ngwongwo na ndị na -ebubata ihe - China Dump Truck Factory
Ibu arọ, dị mfe ma dị irè, nchekwa na ntụkwasị obi, wdg. Nlekọta okomoko okomoko, akụkụ dị mfe, ọmarịcha na nchikota ihu n'ihu, na -enye gị mmetụta anya siri ike. A na -eji Vans ebugharị ụdị ngwaahịa dị iche iche, ma na -emetụta ya na nnukwu ụlọ ọrụ, nnukwu ụlọ ahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu. Nkọwapụta ISUZU CHINA 3m³Dumper (Euro V) Dumper Model QL3040ZA5FAJ Dumper Parameters Chassis model QL1042A6FAY N'ozuzu akụkụ (L x W x H) 5035*2040*2215 (mm) ...
Sinotruk Howo 6 × 4 ụgbọ ala tụfuru
HOWO bụ otu usoro Sinotruck a ma ama, etinyebere n'ọdụ ụgbọ ala a ihe karịrị afọ 10, anyị nwere ọwa pụrụ iche anyị ga-achọta ndị na-azụ ahịa anyị ọnụ ahịa ma ọ bụ gwongworo. Anyị nwere sistemụ ọrụ izu oke zuru oke, nwere ike ịnye gị ezigbo ọrụ n'oge!
Ụgbọ ala Foton Auman 6X4
Ụgbọ ala tụfuru (nke a na -akpọkwa tipper) bụ ụgbọ ala na -ebupute ngwongwo n'onwe ya site na mbuli ụgbọ elu ma ọ bụ igwe. A makwaara ya dị ka gwongworo gwongworo. Ihe mejupụtara ya bụ chassis ụgbọ ala, usoro ebuli hydraulic, ibu akụrụngwa na ike na -ewere ngwaọrụ. A na -akpụzi okpokoro ụgbọ ala site na stampụ na nke a na -ekwe nkwa ike nke obe.